किन दुख्छ महिनावारी हुँदा ? के गर्ने र के नगर्ने ?::Nepali News Portal from Nepal
किन दुख्छ महिनावारी हुँदा ? के गर्ने र के नगर्ने ?
कृष्ण कुमार सैंजु
सामान्यतया ९० प्रतिशत किशोरी तथा महिलाहरूमा महिनावारी हुँदा धेरैलाई खपिनसक्नु पेट दुख्ने, बान्ता आउने, वाकवाकी लाग्ने, ढाड र कम्मर दुख्ने, खान मन नलाग्ने र दैनिक काम गर्न बाधा हुने हुन्छ । यस्तो समस्यालाई डिस्मेनोरिया भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा दुखाई लामो समयसम्म पनि हुन सक्छ । केहि महिलाले दुखाई सहन नसकेर आफूखुसी औषधी सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । दुखाई बढी भएपनि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र औषधी सेवन गर्नुपर्छ । डिस्मेनोरिया प्राइमरी र सेकेन्डरी गरी दुई प्रकारको हुन्छ ।
प्राइमरी डिस्मेनोरिया :
प्राइमरी डिस्मेनोरियामा महिनावारीको बेलामा तल्लो पेट, कम्मर र ढाड दुख्छ । दुखाई बढ्दै गएमा खुट्टा र टाउँको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने लक्षण देखिन सक्छन् । कसैकसैलाई पखाला पनि लाग्ने पनि हुन्छ । यसका कारणहरुमा कम उमेरमा महिनावारी हुनु, इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन हर्माेनहरुको असन्तुलन हुन् । महिनावारी हुँदा पाठेघर खुम्चिने र तन्किने हुनाले तल्लो पेट दुख्छ । महिनावारीमा यौनाङ्गमा कुनै बाधा आयो अथवा रगत बग्ने यौन नली साँघुरो भयोभने पनि प्राइमरी डिस्मेनोरियामा हुन सक्दछ । यो वंशानुगत कारणले पनि हुन सक्छ । अत्याधिक मोटा र सुखमय जीवनशैली बिताउने युवतीलाई पनि यस्तो समस्याको सम्भावना बढी हुन्छ ।
सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया :
सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया २० वर्ष माथिको उमेर समूहका महिलालाई हुने गर्छ । यो प्रायः विवाहिता महिलामा देखिने समस्या हो । यसका लक्षणहरुमा महिनावारी समयमा नहुनु र हुँदा रगत धेरै बग्नु, यौनसम्पर्क गर्दा यौनाङ्ग दुख्नु, बाँझोपना र अत्याधिक सेतो पानी बग्नु आदि हुन् । यस्तो अवस्थामा औषधीको सेवन गर्दा पनि दुखाई कम नहुन सक्छ । प्रजनन रोग, अण्डाशय वा अण्डबाहिनी नलीमा समस्या देखिनु, लामो समयसम्म आइयुसीडी तथा कपर–टीको प्रयोग, अनियमित औषधीको प्रयोगका कारण पनि यस्तो समस्या आउँछ । डिस्मेनोरिया आफैमा रोग होइन तर अन्य रोगको लक्षण हो । त्यसैले समयमै रोगका पहिचान गरी उपचारतर्फ लाग्नुपर्छ ।
– दुध: दुध क्याल्सियमको निकै राम्रो स्रोत हो, महिनावारीको पीडालाई कम गर्न एक ग्लास दुध पिउने गर्नुहोस् यसले क्याल्सियमको कमीलाई पुरा गरीदिनेछ र पीडाबाट आराम मिल्नेछ । यदि तपाईलाई दुध मिठो लाग्दैन भने तपाईले क्याल्सियमको चक्की पनि खान सक्नुहुन्छ ।
–मेवा: महिनावारी भएको बेला खानाले फाइदा पुर्याउँछ । धेरैपटक महिनावारीको दौरान रक्त प्रवाह सहि तरिकाले हुने गर्दैन जसका कारण अझ पीडा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा मेवाको सेवन गर्नाले रक्त प्रवाह ठिक तरिकाले हुने गर्दछ र पीडा पनि कम हुने गर्दछ ।
–गाजर: गाजरले आँखाको लागि राम्रो गर्ने मात्र नभई महिनावारीको पीडालाई पनि कम गर्ने गर्दछ । एक कप गाजरको रस पिउनाले महिनावारी भएको बेला रक्त प्रवाह राम्रो तरिकाले हुने गर्दछ र पीडाबाट पनि राहत मिल्ने गर्दछ ।
–घिउकुमारी: महिनावारीको दौरान एक चम्चा महमा यसलाई मिसाएर खानाले भइरहेको पीडालाई कम गन गर्दछ ।
–तुलसी: पीडा भइरहेको बेलामा तुलसीको पातलाई चियामा मिसाएर खानुहोस् । तुलसीमा भएको क्याफीड एसिडले महिनावारीको पीडालाई कम गर्न गर्दछ । धेरै पीडा भइरहेको छभने ७–८ वटा तुलसीको पातलाई आधा कप पानीमा हालेर उमाल्नुहोस् र त्यसलाई छानेर त्यसको पानी पिउनुहोस् ।
–तातोपानीले नुहाउनुहोस्: तातो पानीले नुहाउनाले रक्त प्रवाह राम्रो गरेर पीडा कम हुने गर्दछ ।
–अदुवा: एक कप पानीमा अदुवालाई काटेर उमाल्नुहोस् । यदि यसको स्वाद मिठो लागेन भने थोरै नुन पनि हाल्नुहोस् र खाना खाइसकेपछि दिनको तीन चारपटक खाने गर्नुभयो भने पीडा कम हुन्छ ।
–व्यायाम: हुनतः हामीले दिन दिनै व्यायाम गर्नु जरुरी छ तर महिनावारीको पीडा भएको बेलामा सामान्य व्यायम अत्यावश्यक कुरा हो । उक्त प्रवाहलाई राम्रो गराउन व्यायामको निकै महत्वपुर्ण भुमिका रहने गर्दछ ।
बिहान हरेक दिन खाली पेटमा ५० ग्राम भिजाएको खजुर खाने उक्त खजुर भिजाएको पानी पिउदा अझै प्रभावकारी हुन्छ । चुकन्दरको ताजा रस सानो गिलासको ,१ गिलास (२ सय एमएल) दैनिक बिहान १ महिनासम्म पिउनाले आइरन क्याल्सियम र अन्य मिनिरलसको मात्रा बढी पाइने हुँदा दुखाईलाई कम गर्न मद्दत पुग्दछ ।
महिनावारी भएको बेला के–के गर्नु हुँदैन ?
धेरै एक्सरसाइज नगर्ने :
महिनावारी भएको बेला धेरै एक्सरसाइज गर्नु हुँदैन । कडा खालका एक्सरसाइजहरु जस्तैः जिम जाने, धेरै दौडिने, योग गर्ने, भारी सामानहरु उठाउने वा शारीरिक बल पर्ने खालका कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा शरीरको ब्लड प्रेसर बढ्न जान्छ । जसबाट रक्तश्राव बढ्न जान्छ । तर यो समयमा हल्का एक्सरसाइज भने गर्न सकिन्छ ।
एउटै प्याड धेरै समय प्रयोग नगर्ने:
महिनावारीको बेला आफूलाई सुरक्षित र सफा राख्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि प्याडको प्रयोग गर्छौँ जसले गर्दा शरीरका अन्य भाग, लुगा वा अन्य बस्ने ठाउँमा रगत नलागोस् । तर हाम्रो बानी के छ भने बिहान प्याड लगाएर निस्किएपछि एकै पटक बेलुका घर पुगेर मात्रै चेन्ज गर्ने । यो एकदमै खराब बानी हो । कम्तिमा पनि ३ वा ४ घण्टामा प्याड परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसो नगर्दा व्याक्टेरियल इन्फेक्सनको खतरा रहन्छ । साथै सोही अवधिमा सफा पानी वा साबुनपानीले योनीलाई नियमित सफा पनि गरिरहनु पर्दछ ।
महिनावारीको बेला रक्तश्रावका कारण त्यसै पनि शरीर कमजोर भइरहेको हुन्छ । शरीरले आवश्यक मात्रामा भिटामिन र मिनरल्सको माग गरिरहेको हुन्छ । यही बेलामा व्रत वा उपवास बस्ने हो भने शरीरलाई गम्भीर असर पर्दछ । त्यसैले यो अवधिमा कहिले पनि भोको पेट बस्ने वा व्रत लिने गर्नु हुँदैन ।
राती लामो समय नबस्ने:
यो अवधिमा शरीरले धेरैभन्दा धेरै आराम खोजेको हुन्छ । त्यसैले पर्याप्त सुत्नु जरुरी हुन्छ । यो बेला करिब ८ घण्टा नियमित सुत्ने गर्नुपर्छ । राती धेरै बेर बस्ने, बिहान चाँडै उठ्ने गर्दा शरीरले आराम पाउँदैन र विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखापर्दछन् । जस्तैः टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, पेट दुखाई बढ्ने आदि । त्यसैले यो अवधिमा पर्याप्त मात्रामा शरीरलाई आराम दिनु जरुरी छ ।
ज्यादा काम नगर्ने:
केमिकल्सहरु प्रयोग नगर्ने:
महिनावारीको बेला त्यसै पनि इन्फेक्सन बढ्ने खतरा रहन्छ । यो बेला अन्य कडा खालका केमिकल्सहरु प्रयोग गरेर योनी धुने वा दुखाईमा मालिस गर्ने गर्नु हुँदैन । जसले दुखाई र इन्फेक्सनको मात्रा झन बढाउँछ । त्यसैले यो बेला सफा पानी वा केमिकल्सरहित साधारण साबुनहरुको मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
फास्टफुड वा जंकफुड नखाने:
यो बेला शरीरलाई अधिक मात्रामा भिटामिनको जरुरत पर्दछ । त्यसैले शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिनयुक्त खाना मात्रै खाने गर्नु पर्दछ । ब्रेड, सेन्डुइच, पिज्जा, वर्गर, चिप्स, चाउचाउलगायतका फास्टफुड वा जंकफुड खायोभने शरीरले आवश्यक भिटामिन र मिनरल्स प्राप्त गर्न सक्दैन । जसका कारण शरीर कमजोर हुन्छ । यसबाट अन्य रोग लाग्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।
धेरै कफी नपिउने:
महिनावारीको अवधिमा शरीरलाई बढी मात्रामा पानीको जरुरत पर्दछ । यो अवधिमा कफी धेरै पिउनाले शरीरलाई डिहाइड्रेट गरिदिन्छ । जसले गर्दा पेट दुखाईको मात्रा झन् बढ्न सक्छ । त्यसैले यो बेला कफी पिउनु हुँदैन । यसका साथै महिनावारीको अवधिमा बढी भन्दा बढी उमालेर मनतातो पानी पिउने, ताजा र भिटामिन युक्त खाना खाने, नियमित सफा सुग्घर रहने, दुखाइ कम गर्ने औषधि भरसक नखाने, धेरै तनावका काम नगर्ने वा तनाव नलिने गर्नु पर्दछ ।
यौन सम्पर्क नगर्ने :
महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन । महिलाको योनीबाट विकारयुक्त रगत बाहिर निस्किरहने भएकोले यो समयमा यौन सम्पर्क गर्नु हुँदैन । यसले इन्फेक्सनको खतरा हुन्छ भने अन्य रोग पनि लाग्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । साथै यो समयमा यौनसम्पर्क गर्दा पेटको दुखाई पनि बढ्न सक्छ ।
महिनावारीका बेलामा रगत कम देखिएको छ र दुखाई अत्यन्त बढी छभने निमपानीको तातो कटिस्नान लिनाले तत्काल पीडा कम गर्दछ । यस्तो बेला बिहान र बेलुका एक हप्ता सम्म २०–३० मिनेट लिनु लाभदायिक हुन्छ ।
उष्णपादस्नान: ३८ डिग्री सेल्सियसदेखि ४० डिग्री सेल्सियससम्मको तातो पानीमा Epsom salt (mgso4 (शिधे नुन) ५० ग्राम हालेर हरेक दिन बिहान र बेलुका आफ्नो दुवै खुट्टा पानीमा डुबाउनु पर्दछ । महिनावारी बन्द भएको तीन दिनपछिबाट महिनावारी सुरु हुनु ३ दिन अगाडिसम्म प्रत्येक दिन तातो कटिस्नान लिनाले, यो रोगबाट पूर्ण रुपमा छुटकारा पाउन सकिन्छ । एनिमा र पेट, कम्मर मा तातो तेलले हल्का मालिस गर्नाले पनि पीडाबाट राहात पाउन सकिन्छ । नियमित थेरापेटिकल (Therapeutical) योग, व्यायाम र सूर्य नमस्कार जस्ता आसन र प्राणयाम गर्नु पर्दछ ।